TPLF Oo Bilaawday Abaabulka Dagaal Ka Dhan Ah Amxaarada, Diyaar Garowga Abiy – Goobjoog News
TPLF Oo Bilaawday Abaabulka Dagaal Ka Dhan Ah Amxaarada, Diyaar Garowga Abiy
Ciidamada difaaca Tigrayga ayaa bilaabay abaabulka dagaal cusub oo ay ku qaadayaan gobalka Amxaarada ee dalka Itoobiya .
TPLF ayaa bilaawday diiwaan gelinta dadka doonaya in ay ku soo biiraan jabhadda diifaaca gobalka, kadib markii bilawgii todobaadkaan ay la wareegen caasimadda gobalka Tigrayga ee Mak’elle.
Xoogaga ayaa sheegay in ay dowladda Itoobiya ay ka cagajiideyso shuruudo ay u soo bandhigtay si ay gobalka xabad joojin uga dhaqan gasho.
Dad ku sugan Magaalada Aksum iyo magaalooyinka kale ee ka tirsan gobalka 8 bilood dagaalka ka taagan yahay ayaa sheegay in si xowli ah uga socdaan diiwaan gelinta ciidama cusub oo ku biiraya dagaalka.
TPLF ayaa si xooggan gacanta hadda ugu heyso magaalada Mak’elle, kadib markii ay ka saareen ciidamada dowladda Itoobiya.
“Nabaddu waa mid qaali ah, waana barwaada dalkeenna” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Itbooyiya Abiy Ahmed galinkii dambe ee shalay xilli uu la hadlayay baarlamaanka dalkaas.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sidoo kale kooxda TPLF ku eedeyay in ay qalalaaso ka waddo gobalka iyo guud ahaan dalka Itoobiya .
Abiy ayaa sidoo kale sheegay in uu mudda kooban ku diyaarin doonno ciidamo kor u dhaafaya Hal milyan si ay isaga caabiyaan Jabhadda TPLF.
Guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa la filaya in dhankooda ay maalmaha soo socda ay ku dhawaaqan natiijada doorashada oo la filayo in ay ku soo baxaan xisbiga Abiy.
Qaramada Midoobay iyo dowladaha caalamka ayaa si wada jir ah ugu baaqay in la xushmeeyo xabad jooninta, si ay gurmad bini’aadanimo u heelan dhamaan dadka ku sugan gobalka Tigrayga oo in ka badan 400,000 qof ay wajaheyso macluul daran.
Boorame: Askari Ka Tirsan Ciidamada Somaliland Oo Dil U Geystay Wiil Dhaalinyaro Ah
Ciidamada Dowladda Oo Al-shabaab Kala Wareegay Deeganno Ka Tirsan Gobalka Mudug